I-TopView-Isicelo sophando kunye nokuma komhlaba-iGeofumadas
NgoDisemba, 2017 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala, Topography
Yonke imihla sibona ukuba iimfuno zethu iguquka kwaye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kuyanyanzeleka ukuba uthenge ezahlukeneyo PC software, GPS kunye Iyonke Isitetjhi, nganye inkqubo ezahlukeneyo, kunye nesidingo inkqubo yokufunda kwindlela nganye, kwaye apho sinokungahambelani kwedatha, kwaye kaninzi akunakwenzeka ukudlula idatha ukusuka kwinkqubo enye ukuya kwenye.
TopView yiNkqubo Yendalo Yonke eyenzelwe ukusebenza kunye nayiphi na inkqubo ye-PC, nayiphina i-PDA, nayiphina i-GPS, nayiphi na isitishi esipheleleyo, nayiphi na iBrithani. Uphuhliswe nguPié de Obra kwiNgcali zeCandelo, apho inani elingaphelanga leendlela ezilungiselelwe ukulungiselela umsebenzi kuMmandla ziqokelelwa. I-TopView idibanisa ulwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-30 yamava kunye nangaphezulu kwe-500 Sector Professionals.
I-TopViewPc yinto ehambelana nayo nayiphi na i-PC, i-Laptop, okanye i-PC ye-Tablet, ngokulindela ukuba yinkqubo ekhethekileyo kuyo yonke into.
-Nye ifowuni yazo zonke iiNkqubo zokuSebenza.
-Isoftware enye yazo zonke iZitishi.
-Isoftware enye yazo zonke i-GPS.
-Ukufunda okukodwa kuyo yonke into.
Amalungiselelo aManyeneyo kunye neeNtu
-Yilungiswe ngendlela ecacileyo kwaye inomdla, inemenyu enokufumaneka ngokulula.
-Zonke iiModyuli ziqukethe iiwindows ezinxibelelana nomsebenzisi ngendlela ecacileyo nenomdla, zifuna idatha eyimfuneko ngawo onke amaxesha ukukhokela ekusebenzeni ngakunye.
Ukungenisa nokuThunyelwa kweDatha
-Imeko ehambelana ngokupheleleyo neenkqubo zePC ezisetyenziswa eSpain.
-Ukuzinikela ekuhlaziyeni kunye nokuziqhelanisa neendlela ezintsha zokuThumela kunye nokungenisa iiNkqubo zangoku nezeNkqubo ezinokuvela.
-Nokungenisa ngokuthe ngqo kunye nokuThunyelwa ngaphandle ngaphandle kokuphindwa kwakhona.
-I-TopVviewPc sisixhobo esifanelekileyo salo msebenzi nangona i-Ce, Pocket, kunye neinguqulelo ze-WorkAbout zikwanemenyu enye yokuNgenisa kunye nokuThumela ngaphandle
-ITVV ivumela ukulayishwa kunye nokubonwa kweBPP, i-TIF, imifanekiso yangemva ye-JPG kunye nokulinganisa kwazo kunye nokurekhoda kokukhangela okutsha okusetyenziswe kwixesha elizayo.
-Ikwavumela ukulayishwa kunye nokubonwa kwe-DXF, DWG ngasemva kunye ne-BMP, TIF, BMP, ukuvumela ukuphathwa kwamacandelo e-CAD kunye nokusetyenziswa ekucaciseni onke amaziko e-CAD.
-Ivumela ukubonwa kwale mifanekiso kwiNkqubo yokuDubula kunye nokuDibanisa amaKhonkco kunye nasekuShukumeni kweModeli yeDigital Terrain. Kwimeko yokugqibela, isidingo sokufakela imifanekiso ekhokelela umqhubi kwi-MDT rhoqo njengesiqhelo seGalufa yeGalufa apho ubukho bendawo yomhlaba abusoncedo ekufumaneni iGreen kwaye iiHowles zibalulekile.
-ITVV ibandakanya ukuphathwa kweeMifanekiso eziGrafiki ezivumela ukuYila, ukucima, ukwenza / ukwenza usebenze, kunye nokuYila uMlinganiso wangoku apho idatha ethathiweyo ebaleni irekhodwa. Ikwayihlonipha neendlela ezisetyenziswayo zokuNgenisa i-DXF. Ukwenza umthambo ukuvumela ukuba kukhawuleziswe kwinkqubo yokulawula idatha
-I-eTVV ibandakanya iindlela ezintsha zokuyila umfanekiso obambekayo kunye neendlela zakudala ezenza iTVV ibe yeyona nkqubo izeleyo kwintengiso.
Amanqaku athe qelele afakwe ngesandla okanye ngokunqakraza kwiscreen.
Amanqaku afakwe kwifayile engeniswe okanye eyathatyathwa ngaphambili.
- Iingcebiso kwi-Intanethi.
Amanqaku athatyathwe kunqamlezo okanye i-longitudinal.
Amanqaku e-Axis edibanisa iZityalo, ukuKhwela kunye neePeralte.
Iibhasile kwiiXYZ Coordinates.
Iibhasile kwiiNdawo eziDibeneyo zeJografi.
- Icandelo lamabhokisi.
- Chaza amacandelo.
-Imodeli zeDigital Terrain.
-Izinto ze-DXF / DWG CAD.
-Ukuthatha iiNqaku eziSisiseko kwiXYZ kunye neJograograph.
-Ukulungelelanisa ukuthatha (iTachymetric).
- Isokisi enqamlezayo.
-Ithala lesiseko eside.
Amanqaku ahlalutywe ngokunxulumene nesiseko.
Amacandelo eCajeadas. Amacandelo Aphrofayili edibeneyo ngeProfayili yiprogram yePC apho iTVView ingenisa idatha yeengongoma zeProfayili nganye eyalelwe ngokunyusa iPk kunye nokuPhuma. Ezi ziqendu ziquka i-Slopes echazwe yiprogram ye-Pc ngokuxhomekeka kwimihlaba yendawo.
Udidi lweSigaba. kuchaziwe Itheyibhile ububanzi TopView negxalaba, Tables Sign + + Berm Hip line, itheyibhile Superelevations, itafile kunye eyinqaba Medium, Vector Table Uluhlu Ithambeka kunye namacandelo Cunetas. Akukho mhlaba wangaphambili okhoyo kwaye inkqubo ivumela ukuba sigqibe isigqibo sokuba sifuna ukuCima okanye ukuBhunqa kwiPk nganye.
-Ivumela ukuphinda ucinge kwakhona nayiphi na iNqaku le-theoretical elichaza icandelo le-Pk yangoku kunye nenqaku elibuyiselwe umgama kunye nokuphakama, lide ibuyeke umva wokulandela emva kwalo naliphi na ithambeka elikufutshane ne-vertex ekhethiweyo.
-Ivumela ukubekwa kweZinto zethiyori kunye nokufikeleka kulo naliphi na icandelo leVector enje ngeSlope.
-Ivumela ukurekhoda amanqaku aGciniweyo woLawulo loMgangatho okanye uShingo oluNqamlezileyo.
- Hlanganisa inkcazo ye parametric kunye neVector. Zonke izinto zeparametric kunye nevektali zidityaniswa ngokulandelelana, ukuvumela ukuphathwa kwamathambeka kuguquka ngokuthe ngcembe ukusuka ekuthambekeni (iFan Slopes), utshintsho olusuka kwi "V" emiseleni ukuya ku "U" imisele, iBerms ebonakala inyamalala. ukuba unyuka uye ezantsi ethambekeni, njl.
-Vumela ukudalwa kwamachiza achaza i-steels, iipaka zemoto, ukutsiba kubunzulu besibonakaliso kwezi zinto, kunye naliphi na inani, nangona kunqabile ukuba kubonakale.
-Idibanisa itafile ye-cant kwi-axis evumela ukuba icandelo elifanayo liSetyenziselwe ii-Axes ezahlukeneyo.
-Njengamacandelo, kunokwenzeka ukurekhoda amanqaku abekwe kwifayile enqamlezayo ukuze ngokudlula nje omnye singamakisha iNtloko, iinyawo, iAxis, kwaye sithathe iTrans Terversal Transversal.
Iimodeli zeDijital (MDT)
-Ukuthatha ngokupheleleyo umzobo obonisa unxantathu sikuyo kunye nokwanda kwe-Cota kule.
-Ivumela ukuRekhoda iiPowuds Points ngokuzenzekelayo zizibeka zikhombise unxantathu apho ibekwe khona kunye nempazamo kububanzi.
-Vumela ukuKhangela iiNodes ngokungathi zingamanqaku aqhelekileyo.
-Ikuvumela ukuba ulayishe i-TIF / JPG / BMP / DXF / DWG imifanekiso ingemva yokulandela umkhondo.
Isikhululo esipheleleyo: Ivumela ukusetyenziswa kwenkqubo ye-Flat Projection kunye ne-UTM. Kwimeko ye-UTM, inkqubo ibala ulungelelwaniso lwe-anamorphosis efanelekileyo kwisifundo ngasinye.
-GPS: Ikuvumela ukuba usebenze kunye neeDatums, kunye neeNkqubo zeNgingqi zaseKhaya (SCL), okanye zombini ngexesha elifanayo. I-SCL ibala uhlengahlengiso lwe-XY kunye no-Z ngokwahlukeneyo ngokwahlukileyo ukuze kulungelelaniswe ngcono kwi-Real Terrain. Ukusetyenziswa kwe-SCL kubandakanya umsebenzi (Ulawulo lwangaphambili) onceda ukungqinisisa ubunyani beenkcukacha (Ulungelelwaniso lwengingqi olungeniswe ngesandla ngempazamo, ii-Geographic Coordinates ezithathiwe ebaleni kwindawo ezingalunganga, umahluko wenkqubo apho iingqokelela zasekhaya zifunyenwe "Utm okanye Iflethi)).
Izilungiso ezisuka kwiSelula (Inkqubo entsha yokubeka indawo).
-Vumela ukuba ubeke indawo kwindawo yeGPS naphi na.
-Yaphelisa imfuno yabasebenzi yokuJongwa kweSensor.
-Ucutha umgca osisiseko ngokufumana i-Precision kunye nokufumana kwiRadioModem.
- KwiPolygonal ende eneGPS ivumela ukutshintsha isiseko seSensor kumgama omkhulu ngaphandle kokunciphisa iBaseline.
-Kusebenza apho isiseko seGPS sele sikhona, singasetyenziswa, nangona ii-Geographic inxibelelana nazo azifani nezethu, ukukwazi ukuguqula isiseko sethu seGPS kwaye sibe nemizwa emibini yokwenza umsebenzi.
-I-TopView ivumela kuzo zonke iiModyuli ze-Stakeout ukuba zivule ifayile ngokulandelelana apho amanqaku amanqaku ngokwenene abhalwe ebaleni ngenqanaba lomhlaba ngokusebenza ngokuzenzekelayo ikhowudi yenqaku elirekhodiweyo elibonisa igama lefayile apho umlungelelanisi oza kuqiniswa , inombolo yakho yePhoyinti, kunye neempazamo ezifunyenweyo xa uyitsalela. Kwaye konke oku kuyinyathelo elinye.
-Le nkqubo sisixhobo esifanelekileyo kuyo nayiphi na iNkqubo yoMgangatho esongeza isantya, i-automation, kunye nokusebenza kakuhle.
Le nkqubo yenzelwe ukusebenza kunye nasiphi na iSitishi esiyiNtloko kunye nayo nayiphi na i-GPS kwi-RTK okanye kwimowudi ye-Static yokuqhubekeka emva, ngendlela yokuba ngokutshintsha nje intambo eqhagamshela i-PDA ngesixhobo esisetyenzisiweyo, sinokuqhubeka sisebenzisa iifayile zeedatha ezifanayo. . Ke sinokuqala umsebenzi nge-GPS kwaye kamva sithathe amanqaku angenakuthathwa kunye nawo, ngenxa yokuba kufutshane nesakhiwo okanye esinye isizathu, kunye neSitishi esipheleleyo ngokutshintsha nje ikhebula kunye nokukhetha isixhobo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba yenzelwe ukuxhasa iinkqubo ezisetyenziswa eSpain kwiPC ezinje ngeAutocad, Clip, Mdt, Istram kunye ne-Ispol, iCartomap, iProtopo, nabanye, bekwazi ukungenisa kuzo ii-Axes ze-Plant and Elevation, uluhlu lwee-Bases Uluhlu lweekhonkco zokubamba, uluhlu lwamacandelo apakishwe, kunye nesiseko sokuthumela ngaphandle, ii-Coordinates, iiprofayili zomnqamlezo, iiProfayili zeLongitudinal, njl.
Ukuba yinkqubo ephuhliswe eSpain, yonke inkqubo, iincwadana kunye neenkqubo zokuncedisa iiPC, njl ... ibhalwe ngeSpanish kwaye yahlengahlengiswa kwimeko yeHartware kunye neSoftware eqhelekileyo eSpain.
Ukulungelelaniswa kwenkqubo kwindawo yayo yokungenisa okanye yokuthumela iifomathi zeefayile kuya kujongwana ngelona xesha lifutshane.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Beka Imephu yeBing njengemephu yemvelaphi kwi-Microstation
Post Next Eli lizwe AYITHI kuthengiswaOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "TopView - Isicelo sovavanyo kunye nokuma komhlaba"
Simahla Akukho mlinganiselo 599106115